Diyaarinta dhalashada | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Baro sida loo codsado dhalashada. Baro shuruudaha si ay u noqdaan muwaadin. Akhri wax dheeraad ah
Saxiix for our fasalka udiyaarin Citizenship free. Gudub aad imtixaanka cilmiga bulshada. Akhri wax dheeraad ah
Waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo badan oo waraysiga Citizenship aad. Akhri wax dheeraad ah
cod-markii ugu horeysay: qaxooti cod markii ugu horeysay
Isdiiwaangalinta cod - hage loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootigaSida loo diiwaangeliyo in la codeeyo - waxa qaxootiga iyo doolka u baahan tahay in la ogaado iyo sababta ay muhiim ah in la codeeyo marka laga eego ee qaxootiga ah.
Noqday muwaaddin Mareykan ahNoqday muwaaddin Mareykan ah: on February 22, 2018, Waxaan u noqday muwaadin Mareykan ah - mudnaan i siiyey iyada oo xaaladaha nolosha. Noqoto muwaadin Mareykan ah waxaa hadiyad ka baxsan dadaalka aniga ii gaar ah. Waxaan aad ugu mahad celinayaa in aad noqoto muwaadin American ahay.